डा.गोविन्द केसीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजाने पहल विफल, सर्वपक्षीय बैठकमा जुटेन सहमति | Ratopati
काठमाडौं– विगत ८ दिनदेखि डडेल्धुरामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले गरेको पहल विफल भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै पहलमा बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकले ‘डा. केसीलाई इच्छाविपरीत लान मिल्दैन’ भन्दै उनको माग सम्बोधनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले रातोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले जोर जबरजस्ती गरेर डा.केसीलाई बाहिर पठाउन नहुने तर्क गरेका थिए । डा.केसीका सहयोगीहरुले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि आएर माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मात्र डा. केसीसँग सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानेबारे आफूहरुले कुरा गर्न सक्ने बताएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।